Scottish Highlands Tracks Tracks iyo Routes
Tracks ugu dambeeyay
Categories : Baaskiil wadista (1)
imagesFadlan xusuusnow: Fadlan calaamadee ka hor inta aanad bilaabin hawsha aad bilowday in ay leedahay goobaha baabuurta la dhigto ama waxaa lagu heli karaa gaadiidka dadweynaha.
XADGUDUB: Warbixinta lagu siiyay Xeerka 4you waxaa lagu siiyay kalsooni wanaagsan, waxaa loogu talagalay oo kaliya in lagu tilmaamo guud ahaan. Waxaan kugula talineynaa inaad xaqiijiso saxnaanta macluumaadka ka hor inta aadan ku tiirsaneyn. Waa mas'uuliyadda shaqsiyaadka si ay u wajahaan waxqabadyada dibadda sida socodsiinta taxadar. Socodku wuxuu noqon karaa mid adag, shakhsiyadduna waa inay hubiyaan in ay ku haboon yihiin ka hor intaanan bilaabin. Haddii shaki ku jiro la tasho dhakhtar.
Iyada oo la soo dajinayo safarkan, waxaan ku heshiinay shuruudaha isticmaalka sida ay bixiso All Seasons. Gaar ahaan, waxaan ku raacsanahay oo waxaan ku dhaqmi doonaa xayiraad kasta oo laga yaabo inay jirto iyo xeerarka iyo sharciyada degaanka!
Ama iskuday raadinteenna horumarsan
Baro Red Map Green Trail Map
Fogaanta: Xaamuusyada 0.83.
Waqtiga: 0h 07m 58s.
Raadinta waxaa sameeyay Doomaha
in Mountain Baaskiilka
7 bilood ka hor.
1609 ayaa ku dhuftey
Khariidadda Red Rock Trail Map waa wadada cagaaran ee u dhaxaysa Fortrose iyo Cromarty ee A832 goobta waxay bixisaa koorsooyin dheeraad ah oo dheeraada iyo sidoo kale boodh.